USB pendrive တစ်ခုမှ Linux ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Linux မှ
USB stick မှ Linux ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုမည်သည့်စက်ကိုမဆို USB မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် netbook များပိုင်ဆိုင်ထားသူများအတွက်အထူးအသုံးဝင်ပြီး Linux install လုပ်ရန် LiveCD ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါတို့လုပ်မယ့်ပရိုဂရမ်ငယ်လေးကိုသုံးမယ် UNetBootinLinux နှင့် Windows အတွက်မူကွဲများရှိသည်။
ဆိုတဲ့ distro ရဲ့ ISO image ကို Download လုပ်ပါ။
UNetBootin ကို download လုပ်ပါ။ Ubuntu တွင် Synaptic ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို install လုပ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Applications> System Tools မှ UNetBootin ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် ၁ တွင် download လုပ်ထားသော ISO ပုံကိုရင်းမြစ်အဖြစ်ရွေးပါ။
USB drive ကို ဦး တည်ရာအဖြစ်ရွေးချယ်ပါ
ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ။ BIOS ကို USB ကနေ boot လုပ်ပါ။
ထို့ကြောင့် CD / DVD တွေကိုသိမ်းဆည်းရုံတင်မကဘူး ခင်ဗျားအရင်ကမီးရှို့ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားက operating system တစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်နိုင်တယ် သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များ၏ iota ကိုမဖျက်ဘဲနှင့်။ ကြောင်းဖော်ပြခြင်းမ အများကြီးပိုမြန်အလုပ်လုပ်သည် ကျနော်တို့ LiveCD / DVD ကနေ system ကို boot လျှင်။
သင်၏ USB ကိုပြန်လည်ရယူရန်၎င်းကို format လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မတတ်နိုင်သောလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ UNetBootin မှကူးယူထားသောဖိုင်များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်လုံလောက်သည်။ 🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » USB stick မှ Linux ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Andres Westra Ureña ဟုသူကပြောသည်
ပြသနာနည်းနည်းရှိတာကကျွန်တော် Kubuntu 12.10 ကို usb ပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပါ။ ထိုအခါသူကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် pc ကိုဖွင့်လိုက်ရင် boot error ရတယ်။ Al .iso သည် md5 ပေါင်းလဒ်ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ BIOS ကို usb boot လုပ်ဖို့ configure လုပ်ထားပြီးပြီ။ ငါကြိုးစားတိုင်းငါ Boot အမှားရတယ်။
Ubuntu ကို usb ဖြင့် boot လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။
Andres Westra Ureñaအားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၌ Fedora disk ပေါ်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ် usb ၌ထည့်ရန်၎င်းကိုသုံးနိုင်မနိုင်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
Edgar Amarilla ဟုသူကပြောသည်
install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် "invalid သို့မဟုတ် corrup kernel image" ဆိုသည့်အချက်ကိုငါ install လုပ်ချင်သော ubuntu သည်မည်သည့်အကူအညီမဆို? ငါလုပ်ဖို့ရှိသည်
Edgar Amarilla သို့စာပြန်ပါ
ဒါဟာအတိအကျအတူတူဖြစ်ပျက်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် bootable usb ကိုအခြားပရိုဂရမ်တစ်ခု (lili) နှင့်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ခုတိုးတက်ကောင်းမွန်မလာကိုဖန်တီးနေသည်။ Lili မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား။
Juan Pablo မြို့တော်ဝန် ဟုသူကပြောသည်
ahhhh ကြီးမြတ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွှင်လန်း!
Juan Pablo Mayoral အားစာပြန်ပါ
unetbootin ကိုအသုံးပြုရန်အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့သင် "hand by" သုံးချင်သော distro ၏ ISO file ကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် Linux Mint စာမျက်နှာသို့သွားပြီးသင်အကြိုက်ဆုံး ISO ကို download လုပ်ပါ။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင် download လုပ်ခဲ့သော ISO file ဖြင့် Live USB ကိုဖန်တီးရန် Unetbootin ကိုသုံးပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ pendrive တစ်ခုမှ linux mint 13 ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသော်လည်းဖြန့်ဝေသည် unebootin တွင်မပေါ်ပါ။
Lubuntu သည်အလွန်ကြီးစွာသော distro ပါတကား!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! တညျ့! 🙂
ငါ Debian နဲ့စမ်းသပ်မယ်၊ ကြည့်ကောင်းတယ်။ စကားမစပ်၊ အဆင့် ၅ မှားတယ်၊ ပုံကို ၂ မှာမဟုတ်ဘဲအဆင့် ၁ မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်တယ်။ ဘာမှမလိုအပ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရူးသွပ်နေတဲ့လေ့လာသူတချို့ရှိနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဟေ့၊ ကျွန်ုပ်ဖိုင်အားလုံးကို ဖျက်၍ linux ရလိုလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
သင် FAT32 အဖြစ်သင် format လုပ်ရမည့် Pendrive သည်သင်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါက၎င်းကို NTFS အဖြစ်ထားခဲ့လျှင်မမေ့ပါနှင့်
အခြားအချက်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍၊ ငါ Lubuntu မှထွက်ခွာသောအခါသင်ရရှိသောသတင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်က pendrive မဟုတ်ဘဲ LiveCD ကဲ့သို့ CD ကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမှာက pendrive ကို extract လုပ်ပြီး enter ကိုနှိပ်ပါ။
ubuntu 12.04 ကတည်းက lubuntu ၏ပုံသဏ္seeာန်ကိုကြည့်ရှုရန် unetbootin ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါကြိုက်ခဲ့သည်နှင့် installation ကိုအပြီးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ့ disk ကိုအပေါ်အများအပြား partitions ကိုရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါမနိုင်, ယခုသူကငါ့ကို ubuntu ကိုစတင်ခွင့်ပြုမထားဘူးကငါမတိုင်မီ kernel ကိုစတင်ရန်ရှိသည်, ငါ့ကိုသာ lubuntu စမ်းသပ်မှုသို့ရနိုင်, ငါ့ကိုမပါဘူး, ငါဘာမှလုပ်လို့မရဘူး
ငါ Juan ဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူး kernel ကိုဖွင့်ပါ။ သင့်ကိုလှဲချတဲ့အမှားကဘာလဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲ။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်မနိုင်သိရန်ပြtheနာကိုအနည်းငယ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
တကယ်တော့ငါ lunubu နဲ့ unetbootin ကိုကြိုးစားပြီး၊ system ကို ubuntu ထဲကို ၀ င်ရောက်တဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုငါ့ကိုခွင့်ပြုမထားဘူး၊ သင်က "သင်ပထမ ဦး ဆုံး kernel ကိုတင်ရန်လိုအပ်သည်" အမှားကပြောခဲ့တယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုမှာ lubuntu မှကျွန်ုပ်ထွက်ခွာသောအခါ“ ငါ့ကိုမလိုချင်သော intallation media ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး tray (ရှိလျှင်) ထို့နောက် enter ကိုနှိပ်ပါ” ဟုပြောပြီးကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
ငါ USB သို့မဟုတ် CD အတွက်ထိုသို့ပြုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း hard disk မှတိုက်ရိုက် lubuntu နှင့် windows ၏သရုပ်ပြမှုကိုသာခွင့်ပြုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ကိုဘာမှလုပ်ခွင့်မပြုခဲ့လို့ပါ။
ငါအဆုံးသတ်လုပ်ခဲ့တာကငါနဲ့ Ubuntu (ပရိုဂရမ်တွေ၊ သိမ်းဆည်းထားတဲ့စာမျက်နှာတွေနဲ့အခြားအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး) နဲ့ lubuntu ကိုခြစ်ရာကနေ install လုပ်ထားတဲ့ partition ကို windows ကနေ format လုပ်ဖို့ပါ။
ကျွန်ုပ်အကူအညီမရခဲ့သည့်အရာနှင့် UNetbootin စာမျက်နှာတွင် usb သည်ယခင်ကဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍၊ တစ်ဝက်တွင်ဒေတာရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းကျန်တစ်ဝက်ကိုထည့်ရန်အလိုရှိလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါရစေ။ လိုချင်သော distro? ဖြစ်နိုင်ရင်ဒေတာကိုဘယ်လိုရယူမလဲ။ သို့မဟုတ်ပါက install လုပ်သော distro ၏မျိုးပွားမှုက၎င်းကိုဆက်သွယ်သည့်အခါအစပျိုးမည်လော။
usb တစ်ခုတွင် linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတပ်ဆင်သောအခါ၎င်းသည် boot, swap နှင့် home partitions များကိုလည်းဖန်တီးပေးသလား။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုထားသော distros နှစ်ခုအတွက် 8 Gb သို့မဟုတ် 16 Gb ဆိုသောကြီးမားသော usb ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
နောက်ဆုံးတွင် Manjaro တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်သိလိုစိတ်ကြောင့် Maneto အတွက်အဘယ်ကြောင့် UNetbootin အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်သနည်း 🙂အနည်းဆုံးပထမမေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုကျွန်ုပ်စောင့်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Elhuerto Delfer ဟုသူကပြောသည်
manjaro သည်ဤနည်းကို သုံး၍ မရပါ၊ dd ကိုရုပ်ပုံရေးသူနှင့်အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်မီးရှို့သည်
Elhuerto Delfer အားပြန်ပြောပါ
တန် CRL ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အခြား USB ဖိုင်များတွင်သိမ်းထားပါက၎င်းတို့ကိုဖျက်ရန်လိုအပ်ပါသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကို USB ပုံစံချစရာမလိုဘဲပုံကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသလား။
tonny crl အားပြန်ကြားပါ
ဟင်း၊ usb bootable လုပ်ပြီးရင်ငါ linux image ကို unzip လုပ်ဖို့ဖိုင်တွေ boot လုပ်ဖို့လား။
၎င်းသည်လွယ်ကူလျှင် Unetbootin မလိုအပ်ပါ။
ဒီပရိုဂရမ်က config file တော်တော်များများကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးတယ်၊ ဒါကြောင့် system ကိုသင်ပြproblemsနာမရှိစေဘဲစတင်နိုင်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသွားကြည့်ပါရန်အကြံပြုပါသည်။ http://unetbootin.sourceforge.net/ http://es.wikipedia.org/wiki/UNetbootin
UetBootin? ... (usb မှ boot ကို configure လုပ်ခြင်းသည် ... ) ကိုတိုက်ရိုက် usb (ယခင်က format လုပ်ခဲ့သည့်) ... တွင် unzip လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Pendrive တွင် UnetBootin သည်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်သနည်း။ unzipped iso image မှဖိုင်များကိုကူးယူခြင်းအပြင် ...
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Synaptis မှသော်လည်းကောင်း၊ ဝဘ်မှသော်လည်းကောင်း Unetbootin ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်၍ မရပါ။ ဤကဲ့သို့သောဖိုင်> 4.3.3 နှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်းတစ်ခုရရှိသည်
usb မှ boot လုပ်နေစဉ်ဤပြသနာကိုကျွန်ုပ်ရရှိနေသည်။
SYS Linux 4.07 EDD 2013-07-25 မူပိုင် (C) 1994-2013 အိပ်ချ်ပတေရုသ Anvin et al
ကျွန်ုပ်သည် .iso ဖြန့်ဖြူးမှုကို USB ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ပရိုဂရမ် ၃၀၀ ကိုကြိုးစားပြီး၎င်းတို့အားလုံး၌အမှားရမိသည်။ ငါ့မှာ Acer Aspire One ရှိတယ်။ ငါ linux ကိုတပ်လို့မရဘူး။
ငါဒီ website မှာအချက်အလက်ရှာ
ကြည့်ပါ၊ အလုံခြုံဆုံးမှာ ISO ကို pendrive သို့ပြောင်းရန် terminal မှ dd command ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ အဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လွယ်ကူသည်။ http://aprenderconlibertad.blogspot.com/2014/06/crear-facilmente-un-pendrive-booteable.html
အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြproblemsနာမရှိဘဲထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည် ..
၎င်းသည် neophyte မှပထမတန်း / သူငယ်တန်းမှမေးခွန်းထုတ်ပါသလား။
၁) ISO ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
၂။ မှန် / ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံကိုလျှော့ချသင့်ပါသလား။
၃။ "unetbootin" ဆိုတာဘာလဲ။ …။
SYSLINUX 4.07 EDD 2013-07-25 မူပိုင် (C) 1994-2013 အိပ်ချ်ပတေရုသ Anvin et al
အမှား - configuration ဖိုင်မရှိပါ
DEFAULT သို့မဟုတ် UI ဖွဲ့စည်းမှုလမ်းညွှန်ကိုမတွေ့ပါ။
ငါအကြံပြုချက်အမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ၎င်းသည် 51 GB disk နဲ့ 0Gb RAM ရှိတဲ့ Olidata L80II1 အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး။
ငါ Linux ကိုအခန်းကန့်သုံးခုရရှိစေရန် Disk ကို Ubuntu မှပြင်ပအတိုင်းလည်း format ချခဲ့တယ်။ ubuntu 12.04 ၏ USB installation ကိုအပြီးသတ်ရန်မည်သူကမည်သူကိုပြုပြင်ရမည်နည်း။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်အား disk မှလုပ်ရန်ကြိုးစားပါကတူညီသောအမှားကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
အိုကေ။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီ ဥပမာအားဖြင့် windows ကိုဘယ်တော့မှ install မလုပ်ဘူး။ ငါလုပ်ချင်တာကတော့ pendrive ကနေ ubuntu 14.04 test ပါ။ ပြTheနာကမကြိုးစားခင်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ windosws အတွက် UNetBootin ကို download လုပ်ပြီး ubuntu 14.04 iso image နဲ့အတူဘောပင်ထဲသို့သိမ်းဆည်းလိုက်သည်။ မေးခွန်းကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ pendrive မှ ubuntu ကိုစတင်မစမ်းသပ်မီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား (သို့) တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပဲတင်ထားသည့်ပရိုဂရမ်များကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အပြည့်အဝစတင်နိုင်ပါသလား။
unetbooting ကိုစတင်ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုပြီးသင်၏အသုံးအဆောင်သည်အသုံးမ ၀ င်သောကြောင့် usb သို့မပို့ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါနောက်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် unetbooting ကို install လုပ်ပါ။ iso image ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်သင်ကူးယူထားသည့် iso ပုံကိုရှာဖွေပါ။ ထို့နောက် pc သည် create ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို usb ဖြင့် boot လုပ်ရန်လက်ခံရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်ပေးသည်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်တောင်းဆိုသောအခါ unetbooting ပရိုဂရမ်ကလုပ်လိမ့်မည်။
carlos contreras ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Windows7ပါ ၀ င်တဲ့ PC တစ်လုံးရှိတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်အဲဒါကို format လုပ်ဖို့ငါပေးနေပြီ။
အခြားအိမ်တစ်လုံး၏ Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်မ ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်အခြားဗိုင်းရပ်စ်တစ် ဦး ကသူ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
သငျသညျအကြှနျုပျကို bootable usb လုပ် Linux ကို install လုပ်ဖို့ငါ့ကိုအကြံပေးနိုင်မလား
carlos contreras အားပြန်ကြားပါ
ကျွန် beg တော် beg သင့်ရဲ့ beg စတင်လေ့လာသူ၏ guide လမ်းညွှန် read ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
usb မှ kali linux ကို run သောအခါ syslinux ကိုရသောအခါကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာရှိနေသည်။ 3.86 2010-04-01 EBIOS မူပိုင် (C) 1994-2010 H. H. Peter Anvin et al
ငါ usb ကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိလျှင်တောင်မှဘာမျှမဖြစ်နိူင်ပါ။ ဘက်ထရီကုန်သွားသည့်အထိ ၀ င်းဒိုးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့နိူင်သည်။ e103746156po@hotmail.com gracias
အလက်ဇန်းဒါး Z. ဟုသူကပြောသည်
Alejandro Z. အားပြန်ပြောပါ
ပြproblemနာက uneboting ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပြီး kali linux ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများတွင်၎င်းသည်၎င်းကိုငါခေါ်သောအရာကိုမမှတ်မိသောနောက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ရမည်ဟုဆိုသော်လည်းသင်ကက်လီလင်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာတွင်သင်ရှာနိုင်သည်
Carlos Torres ကိုပြန်ပို့ပါ
ISO kernel ပြောသောအခါဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်မှာပြ4.0နာတစ်ခုရှိပါသလား။ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိူင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်မှာ Linux XNUMX operating system တစ်ခုရှိပြီး usb memory ထဲကိုသိမ်းချင်ပါသည်။
ကျွန်တော် Linux ထည့်လို့မရပါဘူး ubuntu နဲ့ 64-bit နဲ့ 32-bit version တွေမှာ Linux ကို mint သုံးပြီးငါကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။ Installer မှာအခြား operating system နဲ့အတူ install လုပ်ဖို့ option မရှိတဲ့ screen ကိုဘယ်တော့မှမရဘူး၊ partition box တစ်ခုပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ငါ့မှာ i5 နဲ့ windows7ပါတဲ့ sony netbook ရှိတယ်။
Diana rojas အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်ခေါင်းမှာအစာစားနေတဲ့ HP Mini 210 ရှိတာသိတယ်။ linux ပရိုဂရမ်နဲ့ကြိုးစားပြီး၊ unet၊ ultra iso အစရှိသောအခြားသူများအကြားငါ boot မ ၀ င်နိုင်ဘူး။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့်အခြားဘာမှဖြစ်ပျက်, ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီကျေးဇူးပြု !!!!
မင်္ဂလာပါ Alejandro! သင်၏မေးမြန်းချက်ကို blog.fromlinux.net သို့ပြောင်းရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ဟိုဆေး David Bracho ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းကောင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ Canaima အသစ်တွင်အမှားတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ pendrive ကို boot လုပ်ပြီး ၄ င်းတွင် canaima 4.0 64-bit ရှိသော်လည်းငါ pendrive ဖြင့်စတင်သောအခါမျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီး hard disk ကိုစတင်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘာအကူအညီလိုအပ်ပါသနည်း။
ဟိုဆေး David Bracho အားပြန်ပြောပါ
ငါ post ၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အကြောင်းအရာအကြားတစ် ဦး မကိုက်ညီလည်းမရှိထင်ပါတယ်
Angel Camacaro ဟုသူကပြောသည်
၀ င်းဒိုးများမှကျွန်ုပ်တက်နိုင်သလား။ ကျွန်ုပ်သည် linux ကိုထပ်မံတပ်ဆင်လိုသည်
Angel Camacaro အားပြန်ပြောပါ
Balena Etcher နှင့်အတူအရာခပ်သိမ်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက် Linux distro ကို install လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်သည်
ဘလော့ဂ်တခုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အဲဒါက installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြတယ်၊ မင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိရင်ဒီကိုထားလိုက်ပါ။ https://lareddelbit.ga/2020/01/04/como-instalar-cualquier-distribucion-linux-desde-un-usb/
Pandorga GNU / Linux - ကလေးများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဘရာဇီး distro
EasyPeasy 1.6 RC ရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ netbook အတွက် Ubuntu ဖြစ်သည်